Shirkii Garoowe Uga Socday Dowladda Soomaaliya Iyo Maamul Gobolleedyadeeda Oo Fashil Ku Soo Dhammaaday – somalilandtoday.com
Shirkii Garoowe Uga Socday Dowladda Soomaaliya Iyo Maamul Gobolleedyadeeda Oo Fashil Ku Soo Dhammaaday
(SLT-Garoowe)-Wararka ka imaanaya magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya in shirkii halkaasi uga socday mas’uuliyiinta maamul goboleedyada iyo madaxada dowladda ferderaalka ee Soomaaliya uu fashil ku soo dhamaaday isla markaana wax heshiis ah aan laga gaarin arrimo dhawr ah oo la isku haystay.
Warar ay BBC-du heshay ayaa sheegaya in madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmad Madoobe) uu hadda ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe, halkaasi oo ay diyaarad u taagnayd tan iyo shalay galab. Axmad Madoobe ayaa la filayaa in uu toos u abbaaro magaalada Kismaayo ee xarunta maamulkiisa.
Sidoo kale dhiggiisa Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa isna lagu soo waramayaa in laga yaabo in uu ka dhoofo magalaada Garoowe.
Maamulka Galmudug ayaa lagu soo waramayaa in uu shaaciyay in shirkaasi Garoowe uu fashilmay, waxana sida ku cad war qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada maamulkaasi ay Galmudug ku eedeeynaysaa dowladda dhexe in ay diiday fulinta heshiiskii Jabuuti ku dhex maray maamulkaasi iyo maamulka gobollada dhexe ee Ahlu Suunna, ayna wali faragelin ku hayso arrimaha maamulka Galmudug.
Dowlad goboleedka Galmudug waxaa kale oo ay dowladda dhexe ku eedeysay in ay qaaday tallaabooyin lid ku ah arrimo dhawr ah oo ay ahayd in shirkaasi Garoowe lagu gorfeeyo, waxa uuna maamulkaasi tusaale u soo qaatay sharciga doorashooyinka, batroolka iyo arrimaha dastuurka iyo waliba in dowladdu ay xallin weyday khilaafka kala dhexeeyo maamulkaasi.
Arrinta kale ee lagu xusay warka ka soo baxay madaxtooyada Galmudug ayaa ah arrinta maqaamka magaalada Muqdisho, oo sida Galmugud ay sheegtay ay dowladda dhexe diiday in shirkaasi lagu soo hadal qaado.
Ilaa iyo haatan dowladda federaalka kama ayna hadlin eedeymaha Galmudug iyo in shirkaasi uu fashilmay balse madaxweynaha Puntland ee martida loo yahay ayaa maanta la filayaa in uu ka hadlo sida ay wax u dheceen iyo halka uu xaal marayo.
Arrimaha la isku mari la’yahay ayaa sida la sheegaya waxaa ka mid ah xal u helidda khilaafka u dhaxeeya dowladda dhexe iyo madaxda maamulka Galmudug iyo sidoo kale arrimo ay ka mid yihiin sharciga batroolka.
Dhanka kale, maamulka Jubbaland ayaa dowladda federaalka ku eedeynaya faragelin uu sheegay in ay ku hayso doorashada maamulkaasi, waxana tusaale uu u soo qaatay dhacdo dhawaan ka dhacay garoonka magaalada Kismaayo.
Muddo saddex bilood ah ayaa haatan ka hadhay xilligii loo qabtay in ay dhacdo doorashada madaxtinimada ee Jubbaland, balse ka hor intii aanan la billaabin hawshii isku-duba ridka doorashada ayaa waxaa durbaba soo baxaya muran la xiriira doorashadaasi.
Soo xulista xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland waxa ay ahayd in ay qabsoonto bishii la soo dhaafay ee Abriil, illaa haddana ma cadda xilliga kama dambeysta ah ee xulista lasoo afjarayo.
Wuxuuse marka koowaadba muran ka taagan yahay habraaca xulitaanka xildhibaanada.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubbaland Xamse Cabdi ayaa dhawaan BBC-da u sheegay in go’aanka kama dambeysta ahi ee qofka xildhibaanka noqonaya uu leeyahay guddiga doorashada.
Khamiistii la soo dhaafay ayaa waxaa magaalada Kismaayo ku laabtay Cabdinaasir Seeraar Maax oo horey u ahaa afhayeenka Jubbaland, balse hadda sheegay in uu u tartamayo xilka madaxtinimada maamulkaasi.
Balse imaanshihiisa ayaa waxaa ka dhashay israsaasayn dhex martay ciidamo daacad u ah Seeraar iyo kuwa Jubbaland, ka dib markii Seeraar lagu wargaliyay in la baarayo boorsooyinkii uu watay.
Israsaaseyntaasi ayaa waxaa ku dhaawacantay afar askari, iyada oo Cabdinaasir Seeraar uu falkan ku eedeeyay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam (Axmad Madoobe).
Hase yeeshee war qoraal ah oo kasoo baxay Jubbaland ayaa lagu sheegay in khalkhal la gelinayo amniga magaalada Kismaayo, waxaana eedda dusha looga tuuray dowladda federaalka.
Illo lagu kalsoon yahay ayaa BBC-da u sheegay in madaxweynaha Jubbaland uu shirkii Garoowe isaga baxay ka dib markii ay dhacday israsaasayntii Kismaayo. Axmed Madoobe ayaa dhowaan sheegay in Muqdisho laga soo abaabulayo falal lagu waxyeeleynayo amniga Jubbaland.
Shirka Garoowe ayaa Axaddii la soo dhaafay ka furmay halkaasi waxaana jirtay rajo ah in madaxda halkaasi ku sugan ay isu tanaasuli doonaan oo heshiis lagu kala saxiixan doono.
Madaxdan toddobaadka ku shirayay Garoowe ayaa siyaasad ahaan waxa ay ku kala aragti duwan yihiin arrimo badan, waxaana khilaafkii hore ee u dhaxeeyay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada uga sii daray go’aanka golaha wasiirrada ee dowladda federaalka uu ku meelmariyay hindise-sharciyeedka doorashooyinka, arrintaa oo inta badan ay ka biyo diideen kooxaha mucaaradka ku ah dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada.
Waxyaabaha haatan soo ifbaxay ee dowladd dhexe iyo maamul goboleedyadu aadka isugu khilaafeen waxaa ka mid ah tallaabada golaha wasiirrada dowladda federaalka ay ku meel mariyeen hindise-sharciyeedka doorashooyinka. Qodobka ugu muhiimsan ayaa aha qodob dhigaya in dowladda haatan jirta iyo baarlamaankuba ay xilka sii haynayaan haddii doorashooyinka dalka ay dib u dhacaan.
Arrintan ayaa timid iyadoo bilihii lasoo dhaafay aad loo hadal hayay muddo kororsi la sheegay in madaxda dowladda federaalka ay ka fikirayaan, ayaa qodobka 56-aad ee hindise-sharciyeedka cusub lagu arkay isla arrintan.
Qodobkaasi ayaa waxa uu si qayaxan u caddeynayaa in haddii ay dhici weyso doorashada xildhibaanada baarlamaanka duruufo soo kordhey awgood, in waqti kororsi loo samaynayo baarlamaanka .
Farqada 7-aad ee isla qodobkan ayaa si cad u sheegaya in haddii baarlamaanka muddada loo kordhiyo, in madaxweynahana ay sidaas isla mudadaasi ugu kordheyso xilheynta madaxweynaha Soomaaliya.
Bishii Juunyo ee sannadkii 2017 ayaa waxaa dhacay wax aysan dad badan filanynin, taasi oo ahayd in saddex dal oo ka mid ah dalalka ku bahoobay Khaliijka Carabta ay xiriirkii dublamaasiyadeed u jaraan dalka Qadar oo aad ugu dhawaa dowladda Soomaaliya.
Dalalka Sucuudiga, Imaaraatka Carabta iyo Baxrayn ayaa xiriirka diblamaasiyadeed u jaray dalka Qadar oo ka mid ah dalalka saliidda hodanka ku ah, waxayna ku eedeeyeen in Qadar ay taageerto kooxaha argagixisada.
Soomaliya ayaa qaadatay go’an ah inay dhexdhexaad ka tahay muranka labada dhinac, balse Imaaraadka ayaa u arkayay dowladda inay u janjeerto dhinaca Qadar oo Turkiga uu taagersan yahay.
Bartamihii Abril ee sanadkii 2018, Soomaaliya iyo Iimaaraadka waxay joojiyeen iskaashigii milateri. Tani waxay timid ka dib markii ciidanka ammaanka ee Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen ku dhawaad $10 malyan oo Iimaaraadku dayaarad ku keenay si loo siiyo askarta, waxaana muddo gaaban la xayiray dayaaraddii lacagtaas keentay. Iimaaraadku wuxuu kaloo xiray isbitaal bixin jiray adeeg caafimaad oo lacag la’aan ah.
Murankii u dhaxeeyay waddamada Carbeed waxa uu saameyn weyn ku yeeshay Soomaaliya, oo waxaa dhacday in inta badan maamul goboleedyada ay la saftaan dowladda Imaaraadka Carabta oo ay geeska geliyaan dowladda federaalka oo dad badani u arkayeen in ay u janjeerto dhanka Qadar iyo Turkiga.